Tapitra Ny Fakàna An-keriny Ny EgyptAir ; Votsotra Daholo Ny Mpandeha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2016 17:14 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, русский, Aymara, नेपाली, English
“Manana zava-mipoaka ilay mpaka ankeriny ny #EgyptAir…. Ahoana no nitondrany azy niditra tao anatiny tao? Aza adino fa …” bitsik'i @Andy_Wirral, izay mizara itsy sary etsy ambony itsy
Nifarana, ary votsotra daholo ireo mpandeha, taorian'ny ora fito niarahana taminà mpaka ankeriny iray izay nanery ny mpanamory ny Egypt Air hamily ny làlany avy any Alexandria ho any Kairo hipetraka maika ao Larnaca, Sipra, taorian'ny nilazàny fa nitondra hetra misy zava-mipoaka izy.
Tsy nisy naratra tamin'ilay raharahan'ny sidina MS181, izay nitondra olona 81 tao anatiny, niaraka tamin'ireo mpiasa. Araka ny Egypt Air:
Nambaran'ny loharano ofisialy ao amin'ny Egypt Air ny fahavotsoran'ireo mpandeha rehetra ary ny fahasamborana ilay mpaka ankeriny
Raha ny fantatra dia tsy nitondra akory hetra nisy zava-mipoaka tena izy ilay mpaka ankeriny nandeha irery, Epitiana fantatra amin'ny anarana hoe Seif Eldin Mustafa, fa mety naniry ny hifandray tamin'ny vadiny taloha, teratany Siprioty, na hangataka ny famotsorana ireo vehivavy Ejiptiana voafonja. Raha mbola manjavozavo ny antsipirihany amin'izay nanosika azy hanao izao, maivamaivana ireo mpisera amin'ny aterineto rehefa tsy misy ifandraisany amin'ny asa fampihorohoroana aloha ilay tranga, indrindra fa ireo tontosain'ny Miozolmana.
Tany amin'ny ora voalohany nitrangan'ilay raharaha manahirana, nambaran'ireo manampahefana fa lehlahy iray hafa no nanodina ny fiaramanidina, niteraka resabe momba ny zompirenena ananany sy ny antony.
Mibitsika momba ny sahotaka i S. Rifai, Siriana bilaogera :
My FB right now #EgyptAir— S. Rifai (@THE_47th) March 29, 2016
“Miangavy mba tsy ho Siriana”
“miangavy mba tsy ho Libaney “
“miangavy, miangavy mba tsy ho Palestiniana”
Ny FB-ko izao dieny izao
Raha azon'ny sasany ny ainy fa hoe tsy avy any amin'ny firenena niaviany no niavian'ilay mpaka ankeriny, maro no faly fa hoe tsy misy hifandraisany amin'ny asa fampihorohoroana na ny Islam ilay tranga. Nolazain'ireo manampahefana fa toa olona marary saina ary tsy tadifitra amin'ny resaka fampihorohoroana ilay mpaka ankeriny.
Faritan'i Omar Imran ho “manan-tantara” ilay fanambaràna :
Ooooaaaa Nisy zavatra iray manan-tantara vao nitranga mihitsy. Nambara fa “olona marary saina” ilay Ejiptiana naka ankeriny fa tsy Miozolmana “mpanao asa fampihorohoroana”
Ary i Patrick Baz, mpaka sary fanao an-gazety, mibitsika am-pifaliana tampoka :
Ela ny ela ka afaka isika hankalaza ny Arabo voalohany mpaka ankeriny nambara ho tsy mpampihorohoro, fa olona tsy milamina ara-tsaina
Nefa na izany aza nahazo ny anjarany ihany ny finoana Silamo. Manontany tena i Mohamed Alaraimi :
Nahoana no isaky ny misy olona tsy misaina manao zavatra an-tendrony dia ny finoana silamo no voalohany omenareo tsiny?
Ary i Mohamed El Dahshan, mpanao gazety, mbola maniry ny hahitàna ny rariny. Mibitsika izy:
Ankehitriny, mba marina mafy: “tsy mpampihorohoro hoe”?? Antenaiko fa hahazo ny sazy farany ambony indrindra azo omena izy. Naka ankeriny fiaramanidina anie lery e.